အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း - စာရှုသူများထံမှအသံတစ်သံ
အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
တစ် ဦး က 5+ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်စဉ်းစားရန် 55 အရာ
Jeff Romero မေလ 6, 2021 မေလ 5, 2021 Jeff Romero
မင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးကြိုးစားပမ်းစားကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်အခုတော့နောက်ဆုံးတော့အချိန်ရောက်လာပြီ။ 55 မင်းကအနားယူတော့မှာပါ။ သင်နှင့်သင့်ကြင်ဖော်သည်မိသားစုအိမ်ဟောင်းကိုစွန့်စားမှုအသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်စဉ်းစားနေမည်ဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်နေရာတွင်စတင်မည်ကိုမသိပါ။ အိမ်အသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်းသည်စိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် ...
သင်၏ ၀ န်ထမ်းများကိုမည်သို့လေ့ကျင့်ရမည်နည်း ၅ ချက်
Stephanie Snyder မေလ 6, 2021 မေလ 5, 2021 Stephanie Snyder
အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများကသင့်အား ၀ န်ထမ်းအသစ်တိုင်းကိုလေ့ကျင့်ပေးမည့်ထိရောက်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများအလွယ်တကူရရှိနိုင်စေရန်ပြုလုပ်ပါယခင်ကငှားရမ်းခအသစ်များကိုရုံးခန်းအတွင်းကော်ပိုရိတ်လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ ပစ္စည်းပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများပစ္စည်းအပေါ်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ...
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အဲလက်စ်ဘီလီ မေလ 7, 2021 မေလ 5, 2021 အဲလက်စ်ဘီလီ
ငါတို့အများစုသည်မကြာသေးမီကအိမ်၌အချိန်ပိုကုန်ကြသည်။ သင်သည်အိမ်မှအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မိသားစုတစ်စုကိုပြုစုစောင့်ရှောက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကြာမြင့်စွာနေပြီးဖြစ်စေပြန်သည်ဖြစ်စေ၊ အိမ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်အများစုကိုသုံးဖြုန်းနေသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်နေရာလွတ်သည်လုံခြုံမှုရှိစေရန်နှင့်ဖိတ်ကြားရန်အရေးကြီးသည်။ အတော်များများ ...
၇။ ဥယျာဉ်စိုက်ခင်းတစ်ခုလို Pro တစ်ခုလိုသင်စိုက်ပျိုးနိုင်မယ်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick Stephanie Snyder မေလ 7, 2021 မေလ 5, 2021 Stephanie Snyder
အဘယ်ကြောင့်ဥယျာဉ်ကိုရွေးချယ်? သင်၏ဥယျာဉ်တွင်ပုံမှန်စိုက်ပျိုးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏နှလုံးကိုအားဖြည့်ပေးပြီးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်မှုကိုလျော့ပါးစေသည်။ စိုက်ပျိုးခြင်းသည်သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုးတက်စေပြီးသင်၏ဥယျာဉ်ကိုစွဲမှတ်စေသည်။ သစ်ပင်များသည်လှပပြီးပန်းများနှင့်အရွက်များလည်းတူသည်။ မြက်ခင်းများအတွက်အတုမြက်ကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။
သုတေသနအစီရင်ခံစာကိုဝယ်ပါ။ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် CAGR ဖြင့် ၅.၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဒေါ်လာ ၃၂၉.၈ ဘီလီယံရှိမည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
သုတေသနအစီရင်ခံစာကိုဝယ်ပါ။ အပူ၊ လေဝင်လေထွက်နှင့်လေအေးပေးစက် (HVAC) ပစ္စည်းစျေးကွက်အားသုံးသပ်ခြင်း - လတ်တလောစျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ - ၂၀၂၁ - ၂၀၂၉ ခုနှစ်စက်မှုလုပ်ငန်းခန့်မှန်းချက်
ဝယ်ယူမှုသုတေသနအစီရင်ခံစာ - ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် CAGR ၄.၄% ဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၇၂.၅ ဘီလီယံရှိမည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
သုတေသနအစီရင်ခံစာကို ၀ ယ်ပါ။ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် CAGR ၂.၅% ဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၆.၁ ဘီလီယံခန့်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
သုတေသနအစီရင်ခံစာ - ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစျေးကွက် - ၂၀၂၉ ခုနှစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခန့်မှန်းချက် - အမျိုးအစား၊ ဖြန့်ကျက်မှုပုံစံနှင့်နောက်ဆုံးသုံးစွဲသူအားဖြင့်
Buy Research Report: ၂၀၂၉ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုလိမ်လည်မှုစျေးကွက်သည်ခန့်မှန်းခြေကာလအတွင်း ၁၅% ၀.၀% ဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၈.၆ ဘီလီယံရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်
ဝယ်ယူမှုသုတေသနအစီရင်ခံစာ - ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် CAGR ၁၀.၄% ဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၁.၃ ဘီလီယံခန့်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
သုတေသနအစီရင်ခံစာကိုဝယ်ပါ။ ၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၈ အတွင်းတွင် ၅% ခန့်ရှိသော CAGR ဖြင့်ကြီးထွားရန် Polymer Coated Tabrics Market
ဟာရီကိန်းရာသီနီးလာသည်နှင့်အမျှ IRS သည်လူများအားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်သတိပေးသည်
ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှုကမေလတွင်အမျိုးသားဟာရီကိန်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းရက်သတ္တပတ်ပါ ၀ င်ပြီးအမျိုးသားတောမီးလောင်မှုသတိထားခြင်းလဖြစ်သည်ကိုလည်းလူတိုင်းအားသတိပေးသည်။ ယခုအချိန်တွင်သဘာဝမှရှင်သန်ရန်အရေးပေါ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အချိန်ကျပြီဖြစ်သည်။
Brexit Post-Brexit Alchemy - ယူကေသည်အခွင့်အရေးများကိုမည်သို့ရယူသည်
Brexit ဟာဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုအဖြစ်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခံခဲ့ရပေမယ့်ဗြိတိန်နိုင်ငံကဥရောပစနစ်သစ်အတွက်အဆင်ပြေစွာထိုင်နေသည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (ယူကေ) သည်ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) နှင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာရန်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများသည်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးချက်…
အစ္စရေးနိုင်ငံရှိဘာသာရေးပွဲတော်တွင်လူ ၄၅ ဦး သေဆုံးသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ PickDavid Wexelman
ကြာသပတေးနေ့ညနေခင်းတွင် Meron Galilee ရှိရဗ္ဗိသင်္ချိုင်းရှိ Shimon Bar Yochai ၏နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင်လူ ၄၀ ကျော်နင်းမိပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များခေါ်ဆိုသည့်အရာတွင်ရာနှင့်ချီသောဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သည်။
လူမှုမီဒီယာပေါ်ရှိ IRS ကိုလိုက်နာပါ။ နောက်ဆုံး IRS သတင်းအတွက် e-News Subscriptions အတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ
အယ်ဒီတာရဲ့ PickFilomena Mealy
အခွန်ထမ်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အခွန်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အခြားသူများသည်စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုငွေပေးချေခြင်းနှင့်အခြားအခွန်အခဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်အေဂျင်စီ၏တရားဝင်လူမှုမီဒီယာအကောင့်များနှင့်အီးမေးလ်ကြေးပေးသွင်းစာရင်းများကိုလိုက်နာနိုင်သည်။ ဤပလက်ဖောင်းများသည်နောက်ဆုံးပေါ်…
IRS - လူအများကမေးမြန်းစရာမလိုဘဲဖိုင်တွဲရန်အချိန်ပိုရ - မည်သူမဆိုအလိုအလျောက်တိုးချဲ့ခြင်းကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်
မည်သူမဆိုအလိုအလျောက်အခွန်ကောက်ခံမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်၊ သို့သော်အချို့သောသူများသည်မေးမြန်းခြင်းမပြုဘဲအချိန်ပိုရကြသည်ဟုပြည်တွင်းအခွန်များဌာနမှထုတ်ပြန်သည်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရောဂါကြောင့်ယခုနှစ် IRS သည်Aprilပြီ ၁၅ ရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။
အချို့သောသူများသည်သူတို့၏စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများပေးဆပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တစ် ဦး ထက်ပိုသောသတိပြုမိမှုများအဘယ်ကြောင့်ဤတွင်ကြည့်ပါ
စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုငွေပေးချေမှုသုံးခုစလုံးကိုထုတ်ပေးပြီးနောက် IRS သည်လက်ခံသူတစ် ဦး စီ၏နောက်ဆုံးလူသိများသည့်လိပ်စာသို့အကြောင်းကြားစာတစ်ခုပို့ရန်လိုအပ်သည်။ အသိပေးချက်သည်ငွေပေးချေမှုပမာဏ၊ မည်သို့…
ယခုအခွန်ထမ်းများစွာသည်သူတို့၏ဖက်ဒရယ်အခွန်အခများကိုတင်သွင်းလာကြပြီးသူတို့၏ပြန်အမ်းငွေနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစိတ်အားထက်သန်နေကြသည်။ ပြန်အမ်းငွေနှင့် ပတ်သက်၍ အခွန်ထမ်းများအားလှည့်ဖြားနိုင်သောဘုံဒဏ္severalာရီများစွာရှိသည်။ ဒီငွေပြန်အမ်းရယူပါ ...
IRS.gov ရှိအီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများကို ၂၄/၇ တွင်ရရှိနိုင် - အချက်အလက်တင်ခြင်းနှင့်အကူအညီအတွက်အချိန်онлайнကိုချွေတာနိုင်သည်
ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ကြီးဌာနသည်အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း၊ ပြန်အမ်းခြင်းနှင့်ငွေပေးချေခြင်းလုပ်ငန်းများကိုမြန်ဆန်စေရန်အီလက်ထရောနစ်နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုရန်အခွန်ထမ်းများနှင့်အခွန်ကျွမ်းကျင်သူများအားတိုက်တွန်းသည်။ IRS.gov သည်လူအများသွားလာရန်ကူညီရန်အတွက်အလုပ်အခြေပြုကိရိယာများနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုပြသသည်။
အမေရိကန်ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်တွင်အသေးစားအလုပ်ရှင်များအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများရရှိသော ၀ န်ထမ်းများအားလခပေးဆောင်ရန်အတွက်အခွန်ငွေများ
ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဘဏ္Treာရေးဌာနသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးခံသော ၀ န်ထမ်းများအားလခပေးဆောင်ခြင်းအပါအ ၀ င်အမေရိကန်ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်အရရရှိသောအခွန်ငွေများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြေငြာခဲ့သည်။ အပိုဆောင်း…
အစ္စရေးသတင်း - အစိုးရမရှိပါ
နေတန်ယာဟုကို ၀ န်ကြီးချုပ်အဖြစ်သူနှင့်အတူအစိုးရဖွဲ့ရန်ကြိုးစားရန် ၂၈ ရက်ပေးခဲ့သည်။ အချိန်ကကုန်နေပြီ။ အခက်အခဲများအတွက်အကြောင်းပြချက်မှာ Knesset အသင်း ၀ င်အများစုမှာ…
အမေရိကန်ဒေါ်လာကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်အရနောက်ထပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု ၂ သန်းနောက်ထပ်စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများပေးချေမှုများ
ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှု၊ အမေရိကန်ဘဏ္theာရေးဌာနနှင့်ဘဏ္Serviceာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အရ ၆ ခုမြောက်စီးပွါးရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများပေးဆပ်မှုမှငွေပေးချေမှု ၂ သန်းနီးပါးကို ...
ပုံမှန်အခွန်စည်းကြပ်မှုအမှားများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ - မေ ၁၇ ရက်နောက်ဆုံးနေ့အခွန်ပြန်ပို့ခြင်းအပေါ်အမှားအယွင်းများပြန်အမ်းငွေကိုနှေးကွေးစေနိုင်
ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည်အခွန်ထမ်းများအား ၄ င်းတို့၏အခွန်ငွေကိုပြန်အမ်းငွေများကိုနှောင့်နှေးစေခြင်းသို့မဟုတ်ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သောအမှားများကိုစစ်ဆေးရန်သတိပေးသည်။ မေလကဲ့သို့အခွန်ရှင်းတမ်းကောက်ခံခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းအချို့မှာဤတွင်ပါ။
IRS မှစာသို့မဟုတ်အသိပေးစာရသည့်အခွန်ထမ်းများအတွက်လုပ်ပေးရန်နှင့်မ ၀ င်ပါ
IRS သည်အခွန်ထမ်းများထံသို့အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်စာများ (သို့) သတိပေးချက်များကိုပေးပို့သည်။ သူတို့ကပိုကြီးတဲ့ဒါမှမဟုတ်သေးငယ်တဲ့ပြန်အမ်းငွေကြောင့်ဖြစ်သည်။ အေဂျင်စီအနေဖြင့်၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းရှိသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pickဒေးဗစ်ဂျက်ဆင်၊ MBA
စီးပွားရေးလောကသည်သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုအမြဲအားထားခဲ့သည်။ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကို ... မှတစ်ဆင့်ရယူသုံးစွဲနိုင်သောအချိန်၌ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားရသည်။
ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသူများကိုအမြဲတမ်းလိပ်စာမရှိသူများသို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်မရှိသူများကိုဆက်လက်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းသတိပေးခြင်းအားဖြင့်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှု၊ အမေရိကန်ဘဏ္theာရေးဌာနနှင့်ဘဏ္Serviceာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အရ၎င်းတို့အနေဖြင့်စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများပေးဆပ်မှု၏ပဉ္စမအကြိမ်ငွေပေးချေမှု ၂ သန်းနီးပါးကို ...
IRS အခမဲ့ဖိုင်သည်ပုံစံမချရသူများကိုကူညီ။ အခွန်ငွေချေးစာချုပ်များကိုရှာဖွေ။ ပြန်အမ်းငွေကိုရနိုင်သည်
ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ င်ငွေ ၀ င်ငွေနည်းပါးသူနှင့်အလယ်အလတ်ဝင်ငွေရှိသူတစ် ဦး ချင်းနှင့်မိသားစုများ၊ အထူးသဖြင့်အခွန်ရှင်းတမ်းမတင်သောသူများသည် IRS Free File ကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပြည်ထောင်စုအခွန်စည်းကြပ်မှုပြင်ဆင်ရန်၊ e-file ပြုလုပ်ရန်နှင့်…
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိပြည်သူလူထုသည်သူတို့၏ ၂၀၂၀ အခွန်ငွေကိုတင်ပြကြစဉ်အချို့သည် ၂၀၂၀ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြန်အမ်းငွေ (RRC) ကိုတောင်းဆိုနေကြသည်။ IRS သည် ၂၀၂၀ ခရက်ဒစ်ကိုတောင်းခံ။ အခွန်ထမ်းအချို့ထံသို့စာများပို့နေသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ PickChristina Kitova
Donbas ဒေသတွင်တင်းမာမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်။ ယူကရိန်းသည်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်များ၏မူဝါဒကိုအမေရိကန်ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ယူကရိန်းအစိုးရအပေါ်တွင်အခြားမည်သည့်နိုင်ငံကမျှတိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမရှိချေ။
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအစာများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တို့အားမကြာခဏပြောပြသည်။ သင့်လျော်သောအစားအစာကရောဂါကူးစက်ခြင်း၊ ရောဂါများနှင့်အခြားအခြေအနေများကိုထိန်းသိမ်းထားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးပြီးတက်ကြွသောနေထိုင်မှုပုံစံကိုရရှိစေသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ PickSierra Powell
နွေရာသီသည်မိသားစုနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောပျော်ရွှင်စရာနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါ၏။ အချို့သောအပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကသင်နှင့်သင်၏မိသားစုအားစွန့်စားမှုအသစ်တစ်ခုကိုပေးနိုင်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ PickRayanne Morriss
သင်၏သွားကျန်းမာရေးသည်သင်၏အလုံးစုံကျန်းမာရေးအတွက်အရေးပါသည်။ အကယ်၍ သင်၏သွားများကိုဂရုမစိုက်ပါကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြ,နာများ၊ ဒီမှာအရာအချို့ ...
မိန့်ခွန်းရောဂါဗေဒနှင့်အခြားနယ်ပယ်တစ်ခုတွင်သခင်တစ် ဦး ကိုဆက်လက်ရှာဖွေသင့်မသင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ပထမ ဦး စွာ MA ဘွဲ့နှစ်ခုရှိကြောင်းသင်သိသင့်သည်၊ စာတမ်း (သုတေသန -based) နှင့် Non- စာတမ်း (သင်ရိုး ...
သင်စဉ်းစားသင့်သည့်ထိပ်တန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၅ ခု
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူလိုပါကလူတိုင်းစဉ်းစားသင့်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည်ဖြစ်စေမရွေးချယ်သည်မှာသင်၏ဝင်ငွေနှင့်မည်သို့စီစဉ်ထားသည်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ဖြစ်လိမ့်မယ် ...
သင့်ကလေးအတွက်အထိန်းတစ် ဦး ငှားသင့်သလား။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ကူညီရန်အထိန်းတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းရန်အပြုသဘောဆောင်သည့်အကြောင်းပြချက်အချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ အထိန်းသည်သင့်ကလေးအားကိုယ်ပိုင်ဂရုစိုက်မှုပေးသည်ကလေးတိုင်းသည်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းတို့တွင်ထူးခြားသည်။
Rarible ကဘာလဲ? ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pickisa Charlotte
Rarible ကဘာလဲ? - အတိုချုပ်နိဒါန်း အကယ်၍ သင်သည် crypto နေရာ၌အဆင့်မြင့်စွာအဆင့်မြှင့်တင်ခံရပါက Rarible ဟူသောဝေါဟာရနှင့်၎င်းအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသောသက်ရောက်မှုများအကြောင်းသင်ကြားရဖွယ်ရှိသည်။
ကာကွယ်ဆေးများကိုမှန်ကန်သောနည်းလမ်းများဖြင့်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်း - လက်တွေ့ကျသောလမ်းညွှန်
ကာကွယ်ဆေးကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းအမှားများကြောင့်နှစ်စဉ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများသည်ငွေရေးကြေးရေးအရဆုံးရှုံးမှုများစွာခံကြရသည်။ ကာကွယ်ဆေးအားမလျော်ကန်သောကိုင်တွယ်မှုကြောင့်ဘဏ္Financialာရေးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများသည်…
အများဆုံးသဟဇာတ Zodiac ဆိုင်းဘုတ်များ
သင်သည်သင်၏ကြယ်စုများကိုလေ့လာခြင်း၊ သင်ကဲ့သို့သောအခြားသူများနှင့်သင်ဝေမျှဆုံးအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးများကိုစဉ်းစားခြင်းနှင့်သင်၏ဘ ၀ အတွက်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခြင်းများကိုသင်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးသည်။ သင်၏ဘ ၀ ၏မေတ္တာကိုရှာဖွေသောအခါ…
ဒီနွေရာသီမှာကြိုးစားဖို့3စွန့်စားမှုလှုပ်ရှားမှုများ
သင်ဤနွေရာသီရာသီ၌ပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတစ်ခုခုရှာဖွေနေပါသလား သင်၏ဒေသအတွင်းသင်၌ရှိနိုင်သောအလွန်ကောင်းသောစွန့်စားမှုများစွာရှိသည်။ ယခုပင်သင်စီစဉ်ရန်အချိန်ရှိသည်။
ဒါကအိမ်မှာရောခရီးသွားနေချိန်မှာပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အဆိုးဆုံးအဖြစ်အပျက်မှကာကွယ်ရန်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အဆင့်တစ်ခုမှာမိသားစုနှင့်အိမ်တွင် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်မိသားစုအရေးပေါ်ကိရိယာတစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီကသြစတြီးယားစိတ်ပညာရှင် Viktor Frankl နှင့်“ လူသား၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေခြင်း” ၏အရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည်။ သူသည်စစ်အပြီး၌ဤစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့သောအော့ဇ်ဝစ်မှအသက်ရှင်ကျန်သူဖြစ်သည်။
သင်လျှပ်စစ်ကားကိုခေါ်သောရုပ်ရှင်များမှအဖြစ်မှန်သည်မကြာမီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်ကိုသင်တောင်းဆိုနေချိန်တွင်ယာဉ်တွင်သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းကိုသုံးခြင်းကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များရှိနိုင်သည်။ အနာဂတ်…
Digestible Sensor များမှတဆင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု IoT Revolutionizing Diagnostics
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအရာများ၏အင်တာနက် (IoT) ကိုမျိုးဆက်သစ်အလိုအလျောက်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ လူနာများနှင့်၎င်းတို့၏စောင့်ရှောက်သူများမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အရေးကြီးသောလက္ခဏာများကို ၀ တ်ဆင်နိုင်သော၊
တစ်လုံးတည်းသောသို့မဟုတ်နှစ်ခါရေပန်းရေချိုးသည့်ရေချိုး - သင့်အတွက်မည်သည့်တစ်ခုကသင့်တော်သနည်း။
Double-end ရေချိုးခန်းရေချိုးသည်ယူကေတွင်ရှာဖွေမှုအရှိဆုံးဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျဗတ်ခေတ်သစ်ရေချိုးခန်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာကြောင်းသဘောတူလိမ့်မယ်။ နှင့်အိမ်ပိုင်ရှင်များပင်ရှိရာအချို့သောနေရာများတွင် ...
အနာဂတ်အတွက်အစာကျွေးခြင်း - စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
အယ်ဒီတာရဲ့ PickNirav Parmar
ဒီဂျစ်တယ်စနစ်များ၊ အွန်လိုင်းငွေပေးချေခြင်း၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာစသည်တို့သည်ခေတ်မီနည်းပညာများကိုသူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်စွမ်းအားကို အသုံးချ၍ စက်မှုလုပ်ငန်းများပိုမိုများပြားလာသဖြင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းသည်ကိုယ်ခံအားစနစ်မဟုတ်သောကြောင့်…
လုပ်ငန်းခွင်၌ကောင်းသောထုံးစံနှင့်သန့်ရှင်းမှုရှိရန်အမြဲအရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်အလုပ်ခွင်ရှိလူတိုင်းကိုသင့်အားလေးစားစေပြီးအခြားလူများကိုအအေးမိခြင်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များမှလည်းကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ ဖော်ပြပါ…
မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးနောက်သင်ထိုက်သည့်ပူးပေါင်းမှုနှင့်အထောက်အပံ့ကိုသင်ရရှိရန်အတွက်ရှေ့နေငှားရမ်းခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကိစ္စရပ်အတော်များများတွင်သင်၏ဘက်မှရှေ့နေတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်လျှင်အမြန်ဆုံး…
အစ္စရေးနိုင်ငံရှိ L” AG B'Omer ၏အားလပ်ရက် - ဂါဇာမှအစ္စရေးကိုဒုံးကျည်များဖြင့်ပစ်ခတ်သည်
ရောင်းသူအတွက်လမ်းညွှန် - သင်၏အိမ်ခြံမြေကိုအွန်လိုင်းတွင်ဖော်ပြရန်အကြံပြုချက်များ ၅ ချက်